Romafo 4 NA-TWI - Abraham nhwɛso - Dɛn na yɛbɛka afa - Bible Gateway
Romafo 3Romafo 5
Romafo 4 Nkwa Asem (NA-TWI)
4 Dɛn na yɛbɛka afa yɛn agya Abraham ho? Osuahu bɛn na onyae? 2 Sɛ ɔnam nneɛma a ɔyɛe so nyaa Onyankopɔn anim anuonyam a, anka ɔwɔ biribi a ɔde bɛhoahoa ne ho. Nanso ɔrentumi nhoahoa ne ho Onyankopɔn anim. 3 Kyerɛwsɛm no kyerɛ yɛn sɛ, “Abraham gyee Onyankopɔn dii; na ɛno so na ɛnam maa Onyankopɔn gyee no sɛ ɔtreneeni no.”